कोरोनाको कहरमा नेपाली खेलकुद | नेपालन्युज
कोरोनाको कहरमा नेपाली खेलकुद
नेपालमा कोरोना भाईरसको प्रकोपबाट मुलुकनै आक्रान्त भैरहेको बेला अन्य क्षेत्रमा जस्तै नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको पाईएको छ। मुलुकमा खेलकुद गतिबिधि ठप्प रहेको छ। खेलाडीहरुको नियमित प्रशिक्षण समेत हुन सकेको छैन। लक्षित अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु समेत स्थगित भएको वर्तमान अवस्थामा नेपाली खेलकुद जगतनै लक्ष्य बिहिन भैरहेको छ। मुलुकका कयौं जिल्लाका कभर्डहलहरुमा क्वारेण्टाईन बनाईएकाले खेलकुदका नियमित गतिबिधि समेत संचालन हुन सकेको छैन।
नेपाललाई सर्व प्रथम अन्तराष्ट्रिय पदक दिलाउन सफल पुर्व म्याराथुन धावक जितबहादुर केसीलाई पछिल्लो पटक कोरोना भाईरसको संक्रमण पोजिटिभ भएको पाईएको छ। सन १९७२ मा फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न एशियन ट्र्याक एण्ड फिल्ड प्रतियोगितामा उनले कांस्य पदक जितेका थिए। उनले सोही बर्ष जर्मनीको म्युनिखमा सम्पन्न म्याराथुन दौड भाग लिएका थिए। उक्त दौड संचालन भैरहेको बेला केही किलो मिटर दुरीसम्म उनले अन्य धावकहरुलाई उछिनेका थिए। त्यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका जर्मन टेलिभिजनका कमेण्टेटरले उनलाई सम्भावित विजेताका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। ४२ दशमलव एकनउ पाँच किलो मिटर लामो म्याराथुन दौडको दुरी घटाउंदै जानेक्रममा केसीको खुट्टाको मसलमा अचानक समस्या आएपछि उनि बिजेता बन्नबाट बन्चित भएका थिए। पुर्व धावक केसी लामो समयदेखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर दशरथ रंगशालाको ब्यबस्थापनमा खटिदैं आईरहेका छन। मुलुकमा लकडाउन सुरु भएपछि खेलकुद गतिबिधिपनि सुस्ताउंदै गयो।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले दशरथ रंगशालामा शारिरिक अभ्यास गर्न रोक लगाएपछि उनको कामपनि हलुको भएको थियो। पछिल्लो पटक निषेधाज्ञा जारी हुनु अघि दशरथरंगशालाको मुख्य द्वारमा भेटिएका बयोबृध्द केसीले आफू हरेक ३ दिनमा रंगशालामा रेखदेखकालागि आउने गरेको यस पङ्कतिकारलाई बताएका थिए। तर आफैं संक्रमित भएपछि अब कोरोनामुक्त नभएसम्म रंगशालामा आउन सम्भव भएन। यसैगरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले पनि आफूलाई संक्रमण सार्वजनिक गरेका थिए। संक्रमणबाट क्रिकेट, फुटवल जस्ता खेलका खेलाडीपनि पिडित भएका छन। शशस्त्र प्रहरिबलका केही खेलाडी समेत संक्रमित भएको जानकारी दिईएको थियो।
नेपालमा कोरोनाबाट पिडित पहिलो खेल प्रशिक्षक हिराबहादुर थापा भने संक्रमणबाट मुक्त भएका छन। पुर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन समेत रहेका स्क्वास प्रशिक्षक थापा २३ दिनसम्म ललितपुरको सातदोवाटोस्थित स्क्वास भवनमै सेल्फ आईसोलेसनमा बसेका थिए।
कोरोनाको महामारी फैलिरहंदा नेपालका बिभिन्न खेलका किर्तिमानी खेलाडीहरु पनि महामारी बिरुध्दको यो लडांईमा एक जुट होऔं , बिपत्तिको सामना गर्दै सहकार्यमा जुटौं भन्दै संचार माध्यममा देखिए । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले रंगशालामा क्रिकेट बल खेलाउंदै चाडैं मेटाउने छौं सामाजिक दुरीलाई भन्दै गरेको प्रतिबध्दता नेपाली टेलिभिजनहरुमा धेरै दिन सम्म बज्यो। यसैगरी दक्षिण एशियाली खेलकुदमा ४ पटक स्वर्ण पदक तथा तथा एशियाली खेलकुदमा २ पटक कांस्य पदक जित्ने किर्तिमानी खेलाडी दिपक बिष्ट, नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका शशक्त खेलाडी भरत सावद, लामो दुरीकी धाबिका कान्छीमाया कोजु लगायतका खेलाडीपनि कोरोना बिरुध्द जनचेतना जगाउने कार्यमा संचार माध्यम मार्फत सकृय भएका थिए।
आफ्नै तर्फबाट राहत वितरण
ओलम्पियन दिपक बिष्टतथा १३ औं सागमा ताईक्वाण्डो खेलकी दुईवटा स्वर्ण पदक बिजेता आयशा शाक्यले केहीदिन बिभिन्न स्थानमा गएर आफ्नोतर्फबाट महामारीबाट प्रभावित भएकाहरुलाई राहत वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिएका थिए। उनिहरुले किर्तिपुरको नगांउका दृष्ट्रि बिहिनहरुलाई पनि सहयोग गरेका थिए। साग खेलकुदमा करांतेमा दोहरो स्वर्ण पदक बिजेता मण्डेकाजी श्रेष्ठले भक्तपुरको बिभिन्न स्थानमा राहत वितरण गरेका थिए। सागमा टेबुल टेनिसको टिम ईभेण्टसमा कांस्य पदक पाएकी एरिना महर्जनले आफूले पाएको नगद पुरस्कारबाट १ लाख रुपैंया बराबरको राहत वितरण गरेकी थिईन। यसैगरी पारा ओलम्पिक, फुटबल लगायतका खेलाडीहरुलाईपनि राहत वितरण गरिएको थियो।
नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा बिभिन्न बिभागिय टोलीको बर्चस्व रहेको छ। बिभिन्न खेलका खेलाडीहरु नेपाली सेना नेपाल प्रहरितथा शशस्त्र प्रहरि बलमा आबध्द रहेका छन। मुलुकलाई संकट परेको बेला यस्ता बिभागिय टोलीमा आबध्द रहेका नेपालका प्रख्यात खेलाडीहरुलाई समेत फौजी पोशाकमा सडकमा देखिने गरेका छन। उनिहरुको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने कुरामा नेपाल ओलम्पिक कमिटीले चासो ब्यक्त गरेको थियो।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पदाधिकारीको नियुक्ति केही समय अघि मात्र भएकोले यस्तो महामारीको बेलापनि स्वागतका कार्यक्रमहरु दिनंहु जसो भैरहेका थिए। पदाधिकारीहरुलाई भेटन आउनेहरुको सख्यापनि कम थिएन। हाल खेल गतिबिधि ठप्प भएपनि नयां खेलकुद एन अनुसार बिनियमाबलीहरु बनाउन बैठकहरु बसिरहेको थियो।
कोरोना बिमा कहिले ?
नेपालमा केही खेलाडीलाई समेत कोरोनाको संक्रमण भएको पाईएपनि खेलाडीहरुको यथोचित परीक्षण गर्न भने सकिएको छैन । केही दिन अघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हातामा लायन्स क्लबको सकृयतामा २ सय १० जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो जुन नेपालको खेलकुद क्षेत्रको सानो हिस्सा मात्र हो। यस्तो अवस्थामा हालसम्म खेलकुद परिषदले नेपाली खेलाडीहरुको कोरोना बिमा गरेको छैन। कम्तीमा राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरुको कोरोना बिमा तत्काल गर्न सम्बन्धित खेलाडीहरुले माग गरेका छन। नेपाल क्रिकेट संघले क्रिकेटका राष्ट्रिय खेलाडीहरुको कोरोना बिमा गरेको छ भने खेल प्रेमी दाताको तर्फबाट केही भलिबलतथा ताईक्वाण्डो खेलाडीको बिमा गरिएको छ।
जुत्ता खोई ?
नेपालमा २०७६ साल मसिंरमा सम्पन्न भएको १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद साग आयोजना हुंदा ब्याडमिण्टन खेलमा पनि नेपालले भाग लिएको थियो। प्रतियोगितामा भाग लिने सबै खेलाडीहरुकालागि खेल पोशाक र जुत्ता उपलब्ध गराईएको थियो। प्रतियोगितामा नेपालले ब्याडमिण्टनमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो। तर प्रतियोगिता सम्पन्न भएको लामो समयपछि ब्याडमिण्टन खेलाडीतथा प्रशिक्षकहरुले खेलका बेला आफूहरुले जुत्ता नपाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा उजुरी गरे। परिषदले ब्याडमिण्टन खेल सामाग्री खरिद र वितरणमा भएको अनियमितता छानबिनकालागि कोरोनाको संकटको बेला समेत बनाएको समितिले छानविन सुरु गरिसकेको छ। यसैगरी सात दोवाटोस्थित खेल परिसरमा रहेका रुख कटानका बेला भएको अनियमितताका बारेमा पनि समितिले अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ।
साग खेलकुद सम्पन्न भएको लामो समय भैसक्दापनि अझै बिभिन्न प्रयोजनकालागि लिईएको पेश्की फर्च्यौट गरिएको छैन। नेपाल सरकारले साग खेलकुदमा पदक बिजेता खेलाडीतथा प्रशिक्षकहरुकालागि घोषणा गरेको पुरस्कारको रकम महामारीको बेलामापनि उनिहरुकै खातामा जम्मा गरिदिएको छ। तर संघहरुकालागि प्रदान गरिएको पुरस्कार भने पेश्की फर्च्यौट नगरिएको कारण गल्फ र फेन्सिङ संघ बाहेक अन्य खेलकुद संघले प्राप्त गर्न सकेका छैनन।